महरा सरको दशैँ प्रहरी हिरासतमै ! – Tandav News
महरा सरको दशैँ प्रहरी हिरासतमै !
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७६ आश्विन १९ गते आईतवार १९:५५ मा प्रकाशित
कृष्ण बहादुर महरा । तस्बिर ः गुगल
निर्वतमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई विजया दशमीको अष्टमीका दिन पक्राउ गरेपछि उनले यो दशै हिरासतमा विताउनु पर्ने भएको छ । नवमी र भाइटिका पनि महराले हिरासतमा विताउने छन् । म्याद थप र मुद्दा दायरका लागि जिल्ला अदालत बन्द भएकाले उनी असोज २८ गतेसम्म थुनामै रहेन भएका हुन् ।
दशैँकाे बिदाले पनि उनी याे अबधिमा प्रहरी हिरासतमै हुनेछन । उनको मुद्दाको सुनुवाइ भने अब २८ गतेमात्र हुनेछ। २८ गते अदालत खुलेपछि प्रहरीले महरालाई अदालतमा उपस्थित म्याद थपका लागि उपस्थित गराउनेछ। त्यसपश्चात प्रहरीले अनुसन्धान गर्नको लागि अदालतसँग म्याद प्राप्त गर्दैै मुद्दाको प्रक्रिया अघि वढाउने छ ।
जोत्ने क्रममा बिजुलीको पोल भाँचिदा करेन्ट लागी स्याङजाका कृष्णको मृत्यु